Io no antsoin'ny mpampiasa maro ao amin'ny FaceTime 5.0 ho an'ny macOS Mojave | Avy amin'ny mac aho
Io no fiantsoan'ny mpampiasa marobe amin'ny FaceTime 5.0 ho an'ny macOS Mojave
Amin'ny fampisehoana ny rindranasa Apple nohavaozina hampifandray ireo mpampiasa Apple, na fantatra kokoa amin'ny hoe FaceTime 5.0 dia hitanay ny tena mampiavaka azy, ny fahaizana miresaka amin'ireo mpampiasa 32 miaraka.
Ny FaceTime dia nampifandray ireo mpampiasa erak'izao tontolo izao nandritra ny fito taona. Hatramin'ny fotoana voalohany nahagaga azy tamin'ny kalitaon'ny horonantsary, na dia tsy tsara aza ny fandefasana data. Ny andian-tantara toy ny The Newsroom dia nampandrafy azy io, raha nifandray tsy tapaka tamin'ny alàlan'ny fampiharana ny roa tamin'ireo mpandray anjara. Fa, Inona ireo vaovao ho hitantsika ao amin'ny FaceTime ho an'ny macOS Mojave?
Ny voalohany, ao amin'ny ny fitsapana natao tamin'ny alàlan'ny betas an'ny rafitra fiasan'ny Apple, samy ao amin'ny MacOS Mojave, iOS 12 na koa watchOS 5, antso maro-mpampiasa dia novokarina amina kalitao tena tsara. Raha ny tena manokana dia mahomby ny antso eo amin'ny macOS Mojave public beta sy ny mpampiasa iOS 12.
mihitsy aza, Afaka mandray anjara ny mpampiasa High Sierra fa tsy mahita ny endrik'ireo mpampiasa hafa. Ny antony lehibe indrindra dia ny tsy fisian'ny fanampiana hanatanterahana ny antso miaraka amina olona mihoatra ny iray miaraka.
Araka ny nandrasanay anao, manana interface vaovao izahay. Rehefa miresaka amin'ny olona tokan-tena isika dia mitovy amin'ilay hitantsika ankehitriny ny sary. Ny tena maha samy hafa azy dia ny toerana misy ilay bokotra amin'izao fotoana izao hakana sary mandritra ny resaka. Ao amin'ny FaceTime 5.0 ity bokotra ity dia ampiasaina hanampiana ireo mpampiasa amin'ny resaka.
Ny mpampiasa voalohany ampianay dia hizara ny lamba amin'ny mpampiasa voalohany. Avy amin'ireo mpampiasa telo dia manomboka mitsingevana amin'ny alàlan'ny interface interface FaceTime izy ireo. Ny majika an'i Apple amin'ity indray mitoraka ity no ahitantsika azy rehefa mametraka eo alohan'ny olona ilay olona izay mandefa raki-peo ankehitriny. Na izany aza, azontsika atao ny misafidy mpampiasa iray hametraka azy eo alohaloha amin'ny fanindriana azy fotsiny.
Farany, azonao atao ny manampy olona miantso anao amin'izao fotoana izao, amin'ilay resadresaka nifanaovan'ny vondrona tamin'izany fotoana izany. FaceTime 5.0 dia ho azo amin'ny volana septambra, ary toa lavitra, azo antoka fa hamela antsika fotoana mampihomehy miaraka amin'ny ankohonantsika sy ny namantsika izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » macOS Mojave » Io no fiantsoan'ny mpampiasa marobe amin'ny FaceTime 5.0 ho an'ny macOS Mojave
Nihoaran'ny Amazon i Apple ho marika sarobidy indrindra araka ny Brand Finance
Ny Dr. Dre sy i Jimmy Iovine dia voaheloka handoa $ 25 tapitrisa amin'ny fanjakana roy Beats